Mpanao Gazety Menavazana Sri Lankey Maty Nisy Namono Tao An-tranony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2014 2:44 GMT
Ny tranon'ilay mpanao gazety, Mel Cunasekera avy ao amin'ny Agence France-Presse (AFP) Sri Lanka, maty nisy namono, polisy eo am-panaovana faotorana ao an-drenivohitra Colombo tamin'ny 2 Febroary 2014. Voatsatok'antsy i Gunasekera raha niditra tao an-tranom-pianakaviany. Sary avy amin'i Tharaka Basnavaka. Zon'ny mpamorona Demotix (2/2/2014).
Melicia “Mel” Gunasekera, iray amin'ireo mpanao gazety malaza ao Sri Lanka, no maty voatsatok'antsy tao an-tranony ao Battaramulla, tanàna manodidina an'i Colombo tamin'ny 2 Febroary 2014. Filoha-lefitra tao amin'ny Fitch Ratings Lanka izy ary lehiben'ny tonian-dahatsoratra mpamorona ny Lanka Business Online, habaka mpilaza ny vaovao ara-bola antserasera. Mpanao gazety taloha tao amin'ny Sampam-pampahalalam-baovao Agence France-Presse izy ary niasa ho mpanao gazety mahaleotena ihany koa.
Nanamarika i D. B. S. Jeyaraj fa tena manana ny lazany i Gunasekera ary nankafizin'ireo mpiara miasa aminy ao anatin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao. Nosamborina tamin'io andro io ihany koa ny mpiasa iray mpanao trano ary nilaza ny valin'ny famotorana voalohany fa mety ho vakitrano no anton'ny loza. Saingy antony hafa kosa no eritreretin’ireo mpankafy sy mpanaraka azy.
Nalaka Gunawardene, nanontany hoe “Iza no Tena Namono An'i Mel Gunasekera?” tao amin'ny bilaogy Groundviews:
Araka ny filazan'ny polisy, vola 1200 LKR (10 dolara) sy ny findainy ihany no nangalarin'ilay mpamono olona. Tsy misy antony hafa ahiahiana.
Tranga mampivarahontsana ny fahafatesana rehetra, saingy inona no ataontsika manoloana ny vono olona natao noho ny vola madinika sy sombim-by?
Ahitàna fandinihana mikasika ny antony nahatonga ny firenena iharan'ny hetraketraka ireo fanehoan-kevitra tao Sri Lanka taorian'ny famonoana azy. Nanamarika toy izao ny mpandrafitra lalàna (politika) Rohan Samarajiva tao amin'ny fanomezam-boninahitra tao amin'ny Lanka Business Online:
Izy no tokony hanoratra ny fanomezam-boninahitra ahy, fa tsy izaho no hanoratra izany aminy. Tsy tokony ho faty alohan'ny antitra ny tanora. Tokony nanorina firenena ahafahan'ny tanora mpanao gazety mandray fiaram-pitaterana tsy amin-tahotra ary mandany ny andro Alahady maraina ao an-tranony tsy misy mamono isika. Nihetraketrahan'ny ady isika. Nanjary tsy misy dikany ny famonoana olona.
Ny sasany kosa misaona ilay mpanao gazety ao amin'ny Twitter:
Mel Gunasekera: tsy hahita intsony izany tsiky mahavariana sy maso manjopiaka izany intsony izahay. Veloma, ry namana akaiky manam-panahy.
Nihoro-koditra sady nalahelo raha nahare fa maty nisy namono ilay mpanao gazety Sri Lankey Mel Gunasekera @MelGuna. Miombo-pò amin'ireo fianakaviany sy ny namany.
Mpiara miasa sy mpankasitraka mahatsiaro manokana an'i Mel Gunasekera